Global Voices teny Malagasy » Masoarabo: Fihetsika mikomy sy fepetra ho an’ireo manampahaizana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Desambra 2018 15:36 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Jordania, Palestina, Tonizia, Fiteny, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika, Saripika, Zon'olombelona
Noho ny fikatonan'ny vanim-potoanan'ny fety ao amin'ny tontolon'ny Arabo, nanapa-kevitra ilay bilaogera Ejypsiana Kareem Amer  fa hiala amin'ny mahazatra – nahatonga ny sasany amin'ireo mpamaky azy ho faly ary ny hafa tsy faly!
Avy ao Ejypta ihany, Bint Masreya  (Vehivavy Ejypsiana), misarika fanohanana ho an'ireo mpamaky mba hifidy ny bilaogy momba ny Torture in Egypt (Fampijaliana ao Ejypta)  amin'ny Loka Reporters Without Borders 
Lavitra an'i Neily sy ao anatin'ny Tonizia maitso, manana lahatsoratra mahaliana momba ny fomba fanompan'ny olona ao amin'ny firenena i Subzero Blue  .
Manomboka amin'ny fanompana amin'ny Tsitoha, mankao amin'ny Mpaminany, olona ary koa ny voankazo mihitsy aza ny lahatsoratra mahatsikaiky! Ny fahasamihafana dia ahitana ny «Avy amin'i Allah ,» «Avy amin'ny lohan'ny mpaminany Mohammed » ary « avy amin'ny lohan'ity voankazo ity ».
Ankoatra ny vazivazy, Batir Wardam  avy any Jordania nanangona ny lisitr'ireo manam-pahaizana, mpikaroka sy mpanoratra 100 manan-kery indrindra ao amin'ny tontolo Arabo tao anatin'ny 25 taona. Hatramin'izao, ahitana anarana 90 ny lisitra ary sahirana dia sahirana izy mitady ny anarana 10 ambiny. Saingy manana mason-tsivana henjana i Batir amin'ny fampidirana mpikambana ao amin'ny klioba (lisitra),.
Farany fa tsy ny kely indrindra, avelako miaraka amin'ny lahatsoratra avy amina Palestiniana Osama Alessa , izay nampiditra sary mahavariana misy ny renirano manavatsava any an-tendrombohitra, manerana ny tany efitra, mankany amin'ny Ranomasina Maty ianareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/09/130725/
 Ramadany dia volan'ny fihatsaram-belatsihy: http://karam903.blogspot.com/2006/10/blog-post_25.html
 Torture in Egypt (Fampijaliana ao Ejypta): http://www.tortureinegypt.net/
 Loka Reporters Without Borders: http://www.thebobs.com/index.php?l=en&s=1155503109924847OMDFOOVR-NONE